KACHINNEWS.COM --- Kachin News Group: January 2013
ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (KIA) ဌာနချုပ်နယ်မြေရှိ အရေးကြီးသော လုံခြုံရေးတပ်စခန်းများကို အစိုးရတပ်မှ သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောက် KIO အထက်ပိုင်း အရာရှိအချို့သည် လိုင်ဇာဌာနချုပ်မှ ခရီးပြုနေကြောင်း သိရသည်။
Posted by Kachin News Group at 9:38 PM0comments
မရမ်းကျေးရွာတွင် လက်နက်ကြီးကျည်ကျရောက်ပေါက်ကွဲ၍ မိခင်နှင့်ကလေး သေ ၃ ဦးဒဏ်ရာရ
ညာခြေထောက်နဲံ ညာလက် ဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့ ဦးဂျန်မော် အောင်နူး။
ကချင်ပြည်နယ် မိုးကောင်းမြို့နယ် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (KIA)နှင့် အစိုးရတပ်များတင်းမာသည့် နယ်မြေ မရမ်း (Mayan) ကျေးရွာတွင် လက်နက်ကြီးကျည် ရွာတွင်းသို့ကျရောက် ပေါက်ကွဲသဖြင့် ဒေသခံ ၂ ဦးသေဆုံးပြီး ၃ ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့သည်။
Posted by Kachin News Group at 10:18 PM0comments
ကချင်ဒေသတွင် အဓမ္မနည်းဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရယူရန် ကြိုးပမ်းခြင်းကို ရပ်တန့်ရန် ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် KBC တောင်းဆို
ဇွန် ၁၁၊ ၂၀၁၂ KBC အတွင်းရေးမှူး Rev. Dr. Hkalam Sam Sun မှ နှစ်ခြင်းလူငယ်များရဲ့ ကချင်စစ်ပွဲ ၁ နှစ်ပြည့် အခန်းအနားသို့ တက်ရောက် စကားပြောနေစဉ်။
ကချင်ပြည်နယ် ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (Kachin Baptist Convention, KBC) သည်
ယနေ့ပြုလုပ်သော ငြိမ်းချမ်းရေးဆုတောင်းခြင်းအစီစဉ်တွင် အစိုးရအား အဓမ္မနည်းဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရယူရန် ကြိုးပမ်းခြင်းထက် စစ်မှန်ပြီး တရားမျှတသောငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိနိုင်ရန် “တိကျသောမူဝါဒများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ” ချမှတ်ကာ နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခြင်း အမြန်ဆုံးပြုလုပ်ရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။
Posted by Kachin News Group at 9:50 PM0comments
Posted by Kachin News Group at 5:18 PM0comments
ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (KIA)၏ အရေးကြီးသော လုံခြုံရေးတပ်စခန်းတခုဖြစ်သည့် ခရာဘွမ်တောင်ကုန်း (Hka Ya Bum) ကို အစိုးရတပ်ဖွဲ့မှ တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးနောက် KIA ဌာနချုပ်လိုင်ဇာ (Laiza)ကို ဆက်လက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မည်ကို စိုးရိမ်စွာဖြင့် အကဲခတ်စောင့်ကြည့်နေချိန် သေနတ်သံများ ငြိမ်နေကြောင်း သိရသည်။
Posted by Kachin News Group at 9:46 PM0comments
မိုင်ဂျာယန် ပါကထောင် ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ကလေး ၅၀ ကျော် ၀မ်းရောဂါဖြစ်ပွား
တရုတ်နယ်စပ် စစ်ပြေးစခန်းတခုမှ ကချင်ဒုက္ခသည်များ။
ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ထိန်းချုပ်နယ်မြေ မိုင်ဂျာယန် (Mai Ja Yang) ရှိ ပါကထောင် (Pa Kahtawng) ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ၅ နှစ်အောက် ကလေး ၅၀ ကျော်တွင် ဝမ်းပျက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေကြောင်း မိုင်ဂျာယန် (Mai Ja Yang) ကျန်းမာရေးဌာနမှ သိရသည်။
Posted by Kachin News Group at 9:15 PM0comments
Tycoon Tay Za gives money for army's Kachin offensive
Representatives from firms owned by Tay Za present military officials withacheck for 70 Million Kyat duringarecent ceremony in Burma's capital.
Two firms owned by Burmese billionaire Tay Zaw,awell-connected tycoon known for close ties to Than Shwe's military regime, recently madeajoint 70 Million Kyat (US $82,000) donation to support Burma army troops taking part in the offensive against the the Kachin Independence Organization (KIO).
Posted by Kachin News Group at 2:34 PM0comments
Kachin woman killed by army troops in Hpakant district
The entrance of Ginsi, the headquarters of KIA Battalion6in Hpakant before it was controlled by Burmese government forces on Jan. 18. Photo: Kachin News Group
Last week, 46-year old Zahkung Zung Lwi, was shot and killed by government troops while working on her farm in western Kachin state, according to her family. The incident took place on January 24th near Ginsi village in the jade-rich Hpakant (Phakant) district.
Posted by Kachin News Group at 2:28 PM0comments
အစိုးရစစ်တပ် လိုင်ဇာသိမ်းပိုက်လျင် ဒုက္ခသည်များ တရုတ်ပြည်သို့ခိုလှုံမည်
ကချင်ပြည်နယ် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ဗဟိုဌာနချုပ် လိုင်ဇာ (Laiza) ဒေသရှိ ဒေသခံများနှင့် ဒုက္ခသည်များသည် မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်မှ လိုင်ဇာသို့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လာလျင် တရုတ်ပြည်သို့ ထွက်ပြေးခိုလှုံရန်ပြင်ဆင်နေကြသည်။
Posted by Kachin News Group at 11:29 PM0comments
စစ်ရေးအရ KIA ၏ အရေးကြီးသောစခန်းအားလုံး အစိုးရစစ်တပ်ဖွဲ့မှ သိမ်းပိုက်လိုက်
အစိုးရစစ်တပ်သည် စစ်ရေးအားဖြင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (KIA)၏ အရေးကြီးသော လုံခြုံရေးတပ်စခန်း တောင်ကုန်းများကို သိမ်းပိုက် လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း KIO ပြောသည်။
Posted by Kachin News Group at 11:28 PM0comments
Burma army uses cluster bombs to take key KIO position near Laiza
The KIA headquarters Laiza
Following heavy fighting troops from Burma's military forced troops loyal to the Kachin Independence Organization to abandon Hka Ya Bum,ahill top of strategic significance located near Laiza, on Saturday.
Posted by Kachin News Group at 11:33 PM0comments
Burma Press Release: U.S. on ongoing conflict in Kachin State
1. The Embassy of the United States of America in Yangon issuedaPress Release about the armed conflicts in Kachin State on January 24, 2013.
Posted by Kachin News Group at 4:28 PM0comments
Posted by Kachin News Group at 4:12 PM0comments
30 Tatmadaw soldiers die in Kachin jade district
DOZENS OF GENERAL PEOPLE ARE SEARCHING JADE STONES AT A COMPANY'S MINE IN HPAKANT, WESTERN KACHIN STATE, PHOTO: KACHIN NIWS GROUP
At least 30 Burma army soldiers died on Wednesday following heavy fighting with the Kachin Independence Army (KIA) in the jade rich Hpakant (also Phakant) district of western Kachin state, according to local KIA officers.
Posted by Kachin News Group at 2:22 PM0comments
ကချင်ထိုးစစ်ရပ်စဲရေး တရုတ်နှင့် အမေရိကန် ကောင်စစ်ဝန်ရုံးများရှေ့တွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်
ဇန်န၀ါရီ ၂၅ ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင် တရုတ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးရှေ့မှာ ဆန္ဓပြနေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံကချင်လူမျိုးများ။ ပုံ-ကချင်သတင်းဌာန
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း မြန်မာအစိုးရတပ်များ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ကချင်လူမျိုးများက ချင်းမိုင်ရှိ အမေရိကန်နှင့် တရုတ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးများ ရှေ့တွင် ယနေ့နံနက်က ဆန္ဒပြခဲ့သည်။
Posted by Kachin News Group at 12:43 PM0comments
ကချင်ပြည်နယ်တွင် အစိုးရ၏ အရပ်သားများထိခိုက်စေသော ထိုးစစ်ဆင်ခြင်းအပေါ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်
ဇန်န၀ါရီ ၂၅၊ ယနေ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့ တရုတ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံး ရှေ့မှာ ဆန္ဒပြနေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံကချင်လူမျိုးများ။
မြန်မာအစိုးရတပ်မတော်မှ ထိုးစစ်ဆင်နေသော ကချင်ပြည်နယ်တွင် အရပ်သားများထိခိုက်သေကျေစေပြီး အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို အားယုတ်စေသော တိုက်ခိုက်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေခြင်းကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ပြင်းထန်စွာ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်လိုက်သည်။
Posted by Kachin News Group at 7:32 PM0comments
U.S. Press Release: Ongoing Conflict in Burma’s Kachin State
Posted by Kachin News Group at 5:23 PM0comments
အစိုးရတပ်မှ ဆန်ခါကျေးရွာ နေအိမ်များကိုဖျက်ဆီးကာ ငွေနှင့်ကျောက်စိမ်းတုံးများ လုယက်သွား
ဖါးကန့် KBC ကချင်အသင်းတော်တွင် ခိုလှုံနေတဲ့ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ။
မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်ဖွဲ့သည် ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့ ဆန်ခါ (Sang Hka) ကျေးရွာရှိ ဒေသခံများ၏ နေအိမ်အသီးသီးကို အဓ္ဓမဖျက်ဆီး၍ အဖိုးတန်ပစ္စည်းများရှာဖွေမွှေနှောက်ကာ ငွေနှင့် ကျောက်စိမ်းတုံးများကို လုယူသွားခဲ့ကြောင်း ဒေသခံမျက်မြင်များပြောသည်။
Posted by Kachin News Group at 11:38 PM0comments
KIA ဌာနချုပ်နှင့် အနီးဆုံးစခန်းတွင် အစိုးရတပ်မှ လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပြင်းထန်စွာပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်
လဂျားယန်အနီး လေယာဉ်ပစ် စစ်သေနတ်နဲ့ KIA စစ်သားများ။ ပုံ - KNG ကချင်သတင်းဌာန
အစိုးရတပ်ထိုးစစ်ဆင်နေသော ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဗဟိုဌာချုပ်၏ အနီးဆုံးရှိ ခယာဘွမ် (HKa Ya Bum) တွင် ယမန်နေ့ ၁ နာရီခွဲချိန်မှယနေ့ထိ ပြင်းပြင်းထန်ထန် လက်နက်ကြီးများဖြင့် အဆက်မပျက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေကြောင်း တပ်မဟာ(၅) KIA အရာရှိပြောသည်။
Posted by Kachin News Group at 11:34 PM0comments
U.S. Press Release: Ongoing Conflict in Burma’s Kachin State (English)
Posted by Kachin News Group at 3:48 PM0comments
Aung San Suu Kyi urges Kachin refugee women to endure, avoids criticizing army
ON FEB. 24, 2012, BURMA'S PRO-DEMOCRACY LEADER AUNG SAN SUU KYI TOOK A PARLIAMENTARY BY-ELECTION CAMPAIGN IN MYITKYINA, THE CAPITAL OF KACHIN STATE, NORTHERN BURMA.
Kachin women refugees sheltering in camps in the besieged town of Laiza have receivedamessage of support from National League for Democracy (NLD) leader Aung San Suu Kyi. According to Voice of America (VOA),agroup of Burmese journalists visiting Laiza's camps on Tuesday hand delivered Aung San Suu Kyi's statement which was addressed to Kachin women refugees.
Posted by Kachin News Group at 10:23 AM0comments
လိုင်ဇာမြို့ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ကလေးများ ၁၀၀ ကျော် ၀မ်းရောဂါဖြစ်ပွားနေပြီး ၆ ဦးသေဆုံးမှုရှိ
Je Yang ဒုက္ခသည်စခန်းမှ မိခင်နဲ့ ကလေး။
ကချင်ပြည်နယ် တရုတ်မြန်မာနယ်စပ် လိုင်ဇာမြို့စစ်ပြေးဒုက္ခသည်စခန်းရှိ ၁ နှစ်အောက်ကလေးငယ် အယောက် ၁၀၀ ကျော်တွင် ၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါဖြစ်ပွားနေပြီး သေဆုံးသူ ၆ ဦး ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း လိုင်ဇာ ကျန်းမာရေးဌာနက ပြောသည်။
Posted by Kachin News Group at 10:28 PM0comments
အစိုးရတပ်မှ ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရှိရာနေရာအနှံ့ ထိုးစစ်ဆင်ရန်အင်အားဖြည့်လှုပ်ရှားနေ
ဇန်န၀ါရီ ၂၃ မြစ်ကြီးနားမှ ပန်ဝါသို့ စစ်အင်အားများ သယ်ပို့ပေးနေတဲ့ မြန်မာအစိုးရ ရဟတ်ယာဉ်များ။ ပုံ-KNG ကချင်သတင်းဌာန
ကချင်ပြည်နယ်တွင်း မြန်မာ့တပ်မတော်၏ စစ်ဆင်ရေးလှုပ်ရှားမှုသည် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (KIA) ဗဟိုဌာနချုပ် လိုင်ဇာနယ်မြေသာမက KIA တပ်ချထားရာ ဒေသအနှံ့တွင် ထိုးစစ်ဆင်ရန် အင်အားများတိုးချဲ့၍ ပြင်ဆင်နေကြောင်းသိရသည်။
Posted by Kachin News Group at 10:14 PM0comments
ပညာရေးထိခိုက်မှုမရှိစေရန် လုံခြုံရေးစိုးရိမ်မှုကြားက လိုင်ဇာကျောင်းပြန်ဖွင့်
KIO/KIA ဌာနချုပ် လိုင်ဇာ အနီးမှ ဒုက္ခသည်စခန်းတခု။
မြန်မာအစိုးရတပ်ဖွဲ့နှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (KIA) ဌာနချုပ်နယ်မြေတွင် တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေချိန်ဖြစ်သော်လည်း လိုင်ဇာမြို့ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ခိုလှုံနေသော ကျောင်းသူ/သားများ ပညာရေးနောက်မကျစေရန် ယနေ့မှစ၍ စာသင်ကျောင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်သည်။
Posted by Kachin News Group at 12:02 AM0comments
အစိုးရထိုးစစ်ကြောင့် ဖားကန့် ဂင်ဆီ ဆိုင်းရာဒေသရှိ ဒေသခံ ၃၀၀၀ ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာ
လုံးခင်းနဲ့ KIA တပ်ရင်း ၆ Ginsi ကို ဆက်သွယ်ပေးသော ဥရုချေင်းတံတား၊ ဖားကန့်မြို့နယ်။
မြန်မာအစိုးရတပ်သည် ဖားကန့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (KIA) တပ်ရင်း (၆) ဒေသ ဂင်ဆီဆိုင်းရာအနီးသို့ စစ်ကြောင်းများဖြင့်ဝင်ရောက် ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာသောကြောင့် ဒေသခံများကြောက်လန့်၍ ၄င်းဒေသအနီးဝန်ကျင်ရှိ ကျေးရွာများမှ ရွာသား ၃၀၀၀ ကျော် ဒုက္ခသည်စခန်းသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာကြသည်။
Posted by Kachin News Group at 11:47 PM0comments
Posted by Kachin News Group at 12:31 PM0comments
UN Secretary-General Ban Ki-moon issuedastatement on Sunday hailing the Burmese government's declaration ofaunilateral ceasefire in Kachin state. Ban's comments came despite the fact that heavy fighting between Burma's military and the Kachin Independence Organization (KIO) continues some three days after the ceasefire was supposed to go into effect.
Posted by Kachin News Group at 9:13 AM0comments
အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့နှင့် KIO သီးခြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမည်မဟုတ်
ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO) သည် အစိုးရစစ်တပ်၏ ထိုးစစ်ဆင်မှုများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေချိန် အစိုးရပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် သီးခြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကို ငြင်းဆိုလိုက်သည်။
Posted by Kachin News Group at 1:48 AM0comments
ရန်ကုန်မြို့မှ ကချင်ပြည်နယ် လိုင်ဇာမြို့သို့ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းလျှောက်မည့်သူများ ယနေ့စတင်ထွက်ခွာ
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားသူ တိုင်းရင်းသားလူငယ်များဦးဆောင်၍ ရန်ကုန်မှ မိုင် ၈၀၀ ကျော်ဝေးသည့် တရုတ်ပြည်နယ်စပ် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ထိန်းချုပ်နယ်မြေ လိုင်ဇာမြို့သို့ လမ်းလျှောက်မည့် ခရီးစဉ်ကို ယနေ့ စတင်လိုက်သည်။
Posted by Kachin News Group at 10:24 PM0comments
20-01-2013KIO Statement to Myanmar Govt
Posted by Kachin News Group at 12:35 PM0comments
Despite Kachin “ceasefire” fighting continues
Col. Nhkum Zau Doi, commander of KIA's Battalion6based in Hpakant jade mining township, western Kachin state.
Less thanaday after Burma's government announcedaunilateral halt in its offensive against the Kachin Independence Organization (KIO), fighting continues across Kachin state including areas close to Laiza the KIO's de facto capital and in the jade rich Hpakant (Phakant) region in the far west.
Posted by Kachin News Group at 1:05 AM0comments
19-01-2013 KIO Statement
Posted by Kachin News Group at 3:43 PM0comments
အစိုးရစစ်တပ် ပြင်းထန်စွာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် KIA တပ်စခန်းတချို့နောက်ဆုတ်လိုက်ရ
အစိုးရစစ်လေယာဉ်မှ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ပျက်ဆီးသွားသော လိုင်ဇာအနီး KIA စခန်းတစ်ခု။ ပုံ - ကချင်သတင်းဌာန
အစိုးရတပ်နှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA)များ ဌာနချုပ်လိုင်ဇာမြို့အနီး တပ်မဟာ (၅) နယ်မြေ တွင် အနည်းဆုံး ၃ နေရာ၌ တိုက်ပွဲများပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး KIA တပ်စခန်းတချို့ နောက်ဆုတ်လိုက်ရသည်။
Posted by Kachin News Group at 9:47 AM0comments
မဂါးယန်ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ကလေးငယ်များ ၀မ်းရောဂါဖြစ်ပွား
ကေအိုင်အို ထိန်းချုပ်နယ်မြေ မဂါးယန် (Maga Yang) စစ်ပြေးဒုက္ခသည်စခန်း။
တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် ၀ိုင်းမော်မြို့နယ် ဆဒုန်းဒေသ မဂါးယန် (Maga Yang) ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်စခန်းတွင်ရှိသော ကလေးငယ်များတွင် ၀မ်းရောဂါဖြစ်ပွားနေကြောင်း ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့များပြောသည်။
Posted by Kachin News Group at 6:58 PM0comments
18-01-2013 Burma Govt Statement of Kachin War
Posted by Kachin News Group at 4:56 PM0comments
လကန်းဘွမ်တိုက်ပွဲတွင် အစိုးရတပ်ဖွဲ့မှ ၅ ဦးကျပြီး လက်နက်ကျည်ဆံများ KIA သိမ်းယူရရှိ
ဇန်န၀ါရီ ၁၇ Lakang Bum တိုက်ပွဲတွင် မြန်မာအစိုးရတပ်မှ KIA သိမ်းယူရရှိတဲ့ လက်နက်ပစ္စည်းများ။
ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်ခရိုင် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA) တပ်ရင်း (၂၄) နယ်မြေ ဖွန်းပျဲန်ဘွမ် (Hpun Pyen Bum) အနီး လကန်းဘွမ် (Lakang Bum) တောင်ခြေတွင် မိုးမိတ်အခြေစိုက် အစိုးရတပ်နှင့် ယမန်နေ့ နံနက် ရ နာရီခွဲချိန် တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အစိုးရစစ်တပ်မှ ၅ ဦးသေဆုံးပြီး လက်နက်ကျည်ဆံများ သိမ်းယူရရှိခဲ့ကြောင်း ရှေ့တန်းသတင်းအရသိရသည်။
Posted by Kachin News Group at 11:11 PM0comments
မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် အစိုးရစစ်တပ်မှ စစ်သားစုဆောင်းမှုနှင့် ပေါ်တာအဖြစ်ဖမ်းဆီးနေသော သတင်းများကြောင့် ညမထွက်ရဲ
ကချင်ပြည်နယ်မြို့တော် မြစ်ကြီးနား လုံခြုံရေးတင်းကြပ်။
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်တွင် မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်မှ စစ်သားစုဆောင်းရေးနှင့် ပေါ်တာအဖြစ် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် နေသောသတင်းများကြောင့် ဒေသခံပြည်သူများ ညမထွက်ရဲပဲ စိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေကြသည်။
Posted by Kachin News Group at 9:14 PM0comments
Labels: Burma Army, Myitkyina, porter
Kachin civil society groups urges Suu Kyi condemn army abuses
Burma's Democracy leader Aung San Suu Kyi
A coalition of 16 civil society groups jointly issuedastatement this week urging Aung San Suu Kyi and her fellow parliamentarians from the National League for Democracy to "raise their voices against the ongoing human rights abuses against the Kachin civilians, in accordance with their duty to protect every citizen of the Union.”
Posted by Kachin News Group at 6:56 PM0comments
Pro Thein Sein think tank blames KIO for conflict
A Chinese K-8 jet fighter from Burma military attacked KIA's stronghold on Bum Re Bum mountain near Laiza HQ on Dec. 30, 2012. Photo: Kachin News Group
The International Crisis Group (ICG),aBrussels based think tank, last week described the Kachin Independence Organization (KIO) as bearing responsibility for the ongoing and increasingly bloody Kachin conflict.
Posted by Kachin News Group at 11:37 AM0comments
KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေရှိ ဒုက္ခသည်များအတွက် လုံခြုံမှုရှိသည့်နေရာ ရှာဖွေ၍မရ
Je Yang ဒုက္ခသည်စခန်း၊ KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေ၊ ကချင်ပြည်နယ် အရှေ့ဘက်။
ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ဌာနချုပ်လိုင်ဇာမြို့ (Laiza mare) ကို အစိုးရစစ်တပ်မှ စစ်လက်နက် အင်အားသုံး၍ အဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်နေခြင်းကြောင့် ၄င်းဒေသတွင်ခိုလှုံနေသော ဒေသခံများနှင့် ဒုက္ခသည်များသည် လုံခြုံရေးအတွက် စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုဖြစ်ပွားနေပြီး ခိုလှုံမည့်နေရာများ ရှာဖွေရန်အခက်ခဲရင်ဆိုင်နေရသည်။
Posted by Kachin News Group at 11:10 AM0comments
Labels: Je Yang, Lah Nan
ပါကထောင် ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန် ပုန်းခိုရန်ပြင်ဆင်ထားသည့် ကတုတ်ကျင်းမြေပြိုမှုကြောင့် ကလေး (၃) ဦးသေ
ဇန်န၀ါရီ ၁၅၊ Pa Kahtawng ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန် ပုန်းခိုရန်ပြင်ဆင်ထားသည့် ကတုတ်ကျင်းမြေပြိုမှုကြောင့် ကလေး (၃) ဦးသေ။ ပုံ-Jinghpaw Kasa
ကချင်ပြည်နယ် တရုတ်မြန်မာနယ်စပ် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KIA ထိန်းချုပ်နယ်မြေ မိုင်ဂျာယန်မြို့ (Mai Ja Yang) ပါကထောင် (Pa Kahtawng) ရှိ ဒုက္ခသည် စခန်းတွင် တိုက်ပွဲများကြောင့် လုံခြုံရေးအတွက် ပုန်းခိုရန်ပြုလုပ်ထားသော ကတုတ်ကျင်း မြေပြိုကျမှုကြောင့် ကလေး (၃) ဦး သေဆုံးသွားကြောင်းသိရသည်။
Posted by Kachin News Group at 10:42 AM0comments
Labels: Pa Kahtawng, ပါကထောင်၊ ကလေး၊ ကချင်၊ ဒုက္ခသည်
ကချင်စစ်တပ်မှ ဖမ်းဆီးထားသော အစိုးရတပ်သား ၂၃ ဦးကို လွှတ်ပေး
ဖမ်းဆီးထားတဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ကလေးစစ်သားများကို KIA မှ လွှတ်ပေး။
ဖမ်းဆီးထားတဲ့ မြန်မာအစိုးရ စစ်သားများကို KIA မှ ပြန်လွှတ်ပေးတဲ့ အခန်းအနား လိုင်ဇာမှာပြုလုပ်။
မြန်မာအစိုးရတပ်နှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA) စစ်ပွဲများအတွင်း KIA မှ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ထားသော အစိုးရ တပ်မတော် တပ်သား ၂၃ ဦးကို KIA ဖက်မှလွှတ်ပေးလိုက်ကြောင်းသိရသည်။
Posted by Kachin News Group at 11:25 PM0comments
Labels: ကလေးစစ်သား၊ မြန်မာတပ်မတော်၊ ကေအိုင်အို၊ ကေအိုင်အေ၊ လိုင်ဇာ၊ လာနန်
အစိုးရစစ်တပ်များ ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ကို စစ်တိုက်လေယာဉ်များဖြင့် ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်
တရုတ် K-8 ဂျက်တိုက်လေယာဉ်မှ Bum Re Bum KIA စခန်းကို တိုက်ခိုက်နေပုံ။ ပုံ-KNG ကချင်သတင်းဌာန
စစ်ရေးလေ့ကျင့်နေတဲ့ KIA စစ်သားများ။ ပုံ-KNG ကချင်သတင်းဌာန
မြန်မာအစိုးရတပ်နှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO) သည် ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်ခရိုင် ခယာ (Hka Ya) နှင့် ဘွမ်ရေဘွမ် ( Bum Re Bum) ကြားတွင် တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အစိုးရတပ်ဖက်ကမှ စစ်လေယာဉ်များဖြင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ရှေ့တန်းမှ KIA အရာရှိတဦး KNG ကချင်သတင်းဌာနသို့ပြောသည်။
Posted by Kachin News Group at 2:53 PM0comments
Labels: Bum Re Bum, Hka Ya, K-8 jet, KIO
Burma army soldiers kill three civilians on Putao road
Label of Burma Army's Light Infantry Division No. 33
Two Burma army soldiers shot and killed three civilians while they were traveling on the Putao to Myitkyina road in war torn Kachin state on Monday, according to eye witnesses who claim the shooting was unprovoked. An additional person who was traveling with the group was badly injured.
Posted by Kachin News Group at 2:31 PM0comments
Labels: Burma Army, Kachin, LID 33, Lisu, Putao
Kachin OrganizationJoint Statement January 15
Posted by Kachin News Group at 5:17 PM0comments
RFA Kachin Language Program January 2nd week
Posted by Kachin News Group at 11:31 PM0comments
Labels: Kachin TV, RFA Kachin
Posted by Kachin News Group at 5:21 PM0comments
Burma army soldiers kill three civilians on Putao ...
အစိုးရစစ်တပ်များ ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ကို စစ်...
ပါကထောင် ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန် ပု...
Kachin civil society groups urges Suu Kyi condemn ...
မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် အစိုးရစစ်တပ်မှ စစ်သားစုဆောင်း...
လကန်းဘွမ်တိုက်ပွဲတွင် အစိုးရတပ်ဖွဲ့မှ ၅ ဦးကျပြီး ...
မဂါးယန်ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ကလေးငယ်များ ၀မ်းရောဂါဖြစ်ပ...
ရန်ကုန်မြို့မှ ကချင်ပြည်နယ် လိုင်ဇာမြို့သို့ ငြိမ...
အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့နှင့် KIO သီ...
Aung San Suu Kyi urges Kachin refugee women to end...
U.S. Press Release: Ongoing Conflict in Burma’s Ka...
KIA ဌာနချုပ်နှင့် အနီးဆုံးစခန်းတွင် အစိုးရတပ်မှ လက...
Burma Press Release: U.S. on ongoing conflict in K...
Burma army uses cluster bombs to take key KIO posi...
အစိုးရစစ်တပ် လိုင်ဇာသိမ်းပိုက်လျင် ဒုက္ခသည်များ တရ...
Kachin woman killed by army troops in Hpakant dist...
Tycoon Tay Za gives money for army's Kachin offens...
ကချင်ဒေသတွင် အဓမ္မနည်းဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရယူရန် ကြ...
မရမ်းကျေးရွာတွင် လက်နက်ကြီးကျည်ကျရောက်ပေါက်ကွဲ၍ မိ...